သင့်မွေးချင်းနံပါတ်စဉ်က သင့်ရဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံအကြောင်း ဘာပြောနိုင်သလဲ? - Lifestyle Myanmar
သင့်မွေးချင်းနံပါတ်စဉ်က သင့်ရဲ့မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံအကြောင်း ဘာပြောနိုင်သလဲ?
ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ သင်ယူသင့်တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက် (၄) ချက်
အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်တွေ စားပြီးရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
ခန္ဓာကိုယ်အနံ့က အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဘာ့ကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတာလဲ?
ချစ်မတို့အတွက် Foundation လိမ်းနည်း (၃) မျိုး
ပါရီတိုနိယာမဆိုတာ ဘာလဲ? ၎င်းက သင့်ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေနိုင်သလဲ?
Drama Series တွေထက် ပိုရိုကြသော ကမ္ဘာပေါ်က ရိုမန့်တစ်အဆန်ဆုံး(အရိုဆုံး)နိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံ
ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကို သင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်နေဆဲဆိုရင် ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပါ
သာယာလှပတဲ့ Relationship တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ
သင်ဟာ သင်ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး hot တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြသနေသော လက္ခဏာ(5) ချက်
ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
အထီးကျန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ လျော့နည်းလာစေဖို့ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း (၄) ချက်
သင်နဲ့ သင့်ပါတနာဟာ လုံးဝသူစိမ်းတွေ ဖြစ်လာနေတဲ့ လက္ခဏာ (၇)ခု
သင့်မွေးချင်းနံပါတ်စဉ်က သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မူလထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်စွာ သက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဒါက သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသာ သက်ရောက်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပုံမှာလည်း သက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့မှာ သင့်မွေးချင်းနံပါတ်စဉ်နှင့် သင့်မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံအကြား ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးမွေးတဲ့ ကလေးတွေဟာ များသောအားဖြင့် စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာတတ်ကြပြီး မြင့်မားသော ပန်းတိုင်တွေဆီကို လျှောက်လှမ်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဝိသေသလက္ခဏာတွေကြောင့်ပဲ သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝမှာ အလွန်အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အမြဲတမ်းသူတစ်ပါး စိတ်ကျေနပ်အောင် ကြိုးစားနေသူတွေဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပညာရှင်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သူတို့မှာလည်း တာဝန်ယူမှု မြင့်မားပါတယ်။ အကြောင်းမှာ သူတို့ဟာ များသောအားဖြင့် အသေးစားလူကြီးတွေလို ပြုမှုပြီး အိမ်ကို တာဝန်ယူဖို့ လိုအပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး သူတို့ယူထားတဲ့ နေရာတွေကို လွှမ်းမိုးချင်တဲ့ စိတ်ရှိကြပါတယ်။
အမှားတွေလုပ်မိမှာကို ကြောက်လန့်တဲ့အတွက် အကြီးဆုံးကလေးတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတတ်ပါတယ်၊ သူတို့သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဇုန်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ တွန့်ဆုတ်လာကြပြီး အရာရာကို မပြောင်းလဲချင်ကြတော့ပါဘူး။
သင်ဟာ သားဦးဖြစ်ပါက သင့်ကလေးတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်များစွာ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ သင့်ရဲ့ type A ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ယိမ်းယိုင်မှုက သင့်မိဘပုံစံကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ သင့်အငယ်ဆုံးမောင်နှမတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အပြုအမှုတွေကို မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အငယ်ဆုံးမောင်လေးရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကြားရခဲတယ်ဆိုရင် သင့်ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး သူတို့ရဲ့သဘောထားကို မကြာခဏ ပိုမေးပေးနိုင်ပါတယ်။ (သို့မဟုတ်) သင့်ရဲ့မောင်ငယ်၊ ညီမငယ်တွေက သင့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးလေ့ရှိပါက မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာရင် ရုန်းကန်ရမှုအချို့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်မိသားစုရလာရင် ကလေးကို သည်းခံရပါတော့မယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်ဟာ သင့်ကလေးအတွက် မိမိကိုယ်ကို အလွန်အမင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တောင်းဆိုမှုများလွန်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် သင့်မှာ ကလေးနှစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) ဒီထက်ပိုပါက ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သူတို့က များသောအားဖြင့် မိသားစုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အငယ်ဆုံးလေးတွေ မွေးလာရင် လူတိုင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမယ်၊ ဘယ်လိုအပေးအယူလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို လေ့လာရပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့် အလတ်ကလေးငယ်တွေဟာ လူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်း ပိုမိုများပြားလာပြီး သူငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာ ရှင်သန်ကြပါတယ်။
သူတို့က အရမ်းကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိကြပြီး flow အတိုင်းသွားဖို့ ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။
အလယ်အလတ်ကလေးတွေဟာ မိဘတွေဆီကနေ ဂရုစိုက်မှု သိပ်မရတာကြောင့် လူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေနိုင်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ဟာ မိသားစုထက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပိုရင်းနှီးသော နှောင်ကြိုးတွေ ရှိကြပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ မွေးချင်းထဲမှာ အလတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါက သင့်မိသားစုနှင့် သင့်မိဘတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းကို ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကလေးတွေပေါ်မှာ အဲ့လိုမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်၊
သင်ဟာ သင့်ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှ မြန်မြန်ချမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား ကလေးတွေကို နားထောင်ပေးဖို့နှင့် ဘယ်အငြင်းအခုံပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဖက်စလုံးက ကြည့်နိုင်ချေ ပိုရှိပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် မျှတတယ်လို့ ထင်သောအရာကို အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။
ဖယ်ကြဉ်ခံရခြင်းက ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကို သင်သိတာကြောင့် သင့်ကလေးတွေရဲ့ခံစားမှုတွေကို နားထောင်ပေးဖို့ ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။
မိသားစုရဲ့အထွေးဆုံးလေးတွေဟာ အခြားမွေးချင်းတွေထက် လွတ်လပ်မှု ပိုရလေ့ရှိပြီး ရလဒ်အနေနဲ့ သူတို့ဟာ လွတ်လပ်ပြီး ယုံကြည်မှု ပိုရှိကြပါတယ်. သူတို့ဟာ များသောအားဖြင့် လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်တွေရှိကြပါတယ်၊ ပျော်တတ်ပြီး ဖော်ဖော်ရွေရွေနေတတ်ကြပါတယ်။
အငယ်ဆုံးတွေက စွန့်စားရတာကြိုက်သူတွေဖြစ်ပြီး သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပိုပွင့်လင်းကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ ပင်ကိုသဘာဝအရ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသူတွေဖြစ်ပြီး ဒီအတွက်ကြောင့် မကြာခဏ အာရုံစိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်၊
မိသားစုရဲ့ အထွေးဆုံးအနေနဲ့ သူတို့ဟာ တာဝန်ယူမှုနည်းပါးပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဂရုမစိုက်သော အပြုအမှုများ ရှိတတ်ပါတယ်။
အငယ်ဆုံးတွေဟာ အခြားသူတွေကို ခြယ်လှယ်တဲ့ ကလေးအဖြစ် သူတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အသုံးချဖို့ သင်ယူကြပါတယ်။
သင်က မိသားစုထဲမှာ အငယ်ဆုံးကလေးဆိုရင် ကိုယ့်ကလေးတွေကို စွန့်စားခန်းရှာဖို့ အားပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ များသောအားဖြင့် မိသားစုအတွက် မှန်ကန်တဲ့အရာကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ သင့်ကိုယ်ပိုင်ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကို ယုံကြည်ပါတယ်။
သင်ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ရတဲ့သူ ဘယ်သူမှမရှိတာကြောင့် သင့်မိသားစုမှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ရတဲ့အခါ ပြဿနာအချို့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သတိရသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချို့သော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို ဆည်းပူးတာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်း လေ့လာသင်ယူတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကလေးတွေကို နူးညံ့သိမ်မွေ့ပေးရပါမယ်၊ သို့သော် ဒါက အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုမဟုတ်ကြောင်း မမေ့ပါနဲ့နော်။
၄။ တစ်ဦးတည်းသော ကလေး
တစ်ဦးတည်းသော ကလေးတွေဟာ သားဦးကလေးတွေနဲ့ ဆင်တူပါတဘ်။ သူတို့ဟာ ယုံကြည်မှုရှိပြီး အောင်မြင်ကြပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် မွေးဖွားလာသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် သူတို့ဟာ အခြားကလေးတွေကို ဂရုစိုက်ခြင်း (သို့) ကစားစရာကို မျှဝေခြင်းတို့ မရှိတတ်ကြပါဘူး။ တခြားသူတွေနဲ့ တစ်ခါမျှ ယှည်ပြိုင်ခဲ့ရတာ မရှိတာကြောင့် အတ္တဆန်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဦးစားပေးခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အရမ်းကို ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီး စွန့်ဦးတီထွင်ချင်စိတ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ လုံလရှိသူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
လူကြီးတွေဖြင့်သာ ဝန်းရံခံထားရတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကလေးတွေဟာ ကြီးပြင်းလာတာနှင့်အမျှ နှုတ်ရေးပိုကြွယ်ပြီး ရင့်ကျက်လာကြပါတယ်။
မိဘတွေအနေဖြင့် တစ်ဦးတည်းသော ကလေးတွေ
တကယ်လို့ သင်ဟာ တစ်ဦးတည်းသော ကလေးဖြစ်ပါက သင့်မိသားစုကို ဖန်တီးတဲ့အခါ ပြဿနာအချို့ရှိပါလိမ့်မယ်။ မွေးချင်းမောင်နှမတစ်ဦးအတွက် မိဘတစ်ယောက်အဖြစ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိတာကြောင့် သင်ပိုင်ဆိုင်သမျှကို ဝေမျှဖို့ ဘယ်လိုသင်ယူရမယ်ဆိုတာကို မသိတဲ့အတွက် ရေနည်း ငါးကဲ့သို့ ခံစားမိနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင့်လက်တွဲဖော်အဖြစ် ” အငယ်ဆုံး” ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးစုံတွဲတွေ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကင်းမဲ့သော စိတ်ဓါတ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိထားခြင်းက ကောင်းမွန်သော မျှတမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သီးသန့်အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း မမေ့ပါနဲ့။ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်နဲ့ နေရာတွေမှာ နေသားတကျရှိပြီးသားဖြစ်ပါမယ်။
Lifestyle Myanmar မှ ရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ ဆောင်းပါးများကို အခြားသော Media ၊ Website များနဲ့ Facebook Page များမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဘဝဆိုတာ ဘယ်တော့မှ တစ်ဖြောင့်တည်းမသွားပါဘူး။ အစဉ်အမြဲအတက်အကျဆိုတာ ဖြစ်ပျက်နေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ အရာအားလုံးကို အလိုလိုဝမ်းနည်းတတ်တယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့လည်း သင်ယူသင့်ပါသေးတယ်။ ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ သင်ယူတဲ့နေရာမှာ မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေလည်း သင်ယူရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေပေါ့။ ၁။ မိဘတစ်ဦးသေဆုံးခြင်း ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူတစ်ဦးသေဆုံးခြင်းက ကိုယ့်အတွက်အမြဲတမ်းခက်ခဲစေပါတယ်။...
သင့်ပါတနာမှာ သင်မကြိုက်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ ရှိနေတယ်၊ ဒါကို သင့်အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားရင် ဒါကမကောင်းတဲ့ အကြံအစည် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အခြားလူတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲပေးလို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုကြိုးစားခြင်းက ဆန့်ကျင်ဘက် သက်ရောက်မှုတွေတောင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့...
ကျွန်မတို့အများစုက ကိုယ့်ရဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Hot တယ်ဆိုတာမျိုးကို ထည့်စဉ်းစားချင်မှာ စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီအချက်တွေရှိနေရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ခါတလေ Sexy ကျတယ်လို့ တွေးမိတဲ့ကာလတွေထက် ကိုယ်ဟာ ပိုပြီး Hot တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ၁။ သင်ဟာ သဘာဝကျကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိသူဖြစ်တယ်။...
အားလုံးက တစ်နေ့တစ်နေ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လောကဓံတွေ၊ မတူညီတဲ့လူသားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့နောက် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို သီးသန့်ရှာဖွေနေရသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့က လူတိုင်းမျှော်လင့်တောင့်တနေရတဲ့အရာမဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက တစ်နေ့တစ်နေ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လောကဓံတွေ၊ မတူညီတဲ့လူသားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့နောက် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို သီးသန့်ရှာဖွေနေရသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။...
သင့်စိတ်ဟာ ညစ်ပတ်နေလား? သန့်ရှင်းနေလားစစ်နိုင်မယ့် Mind Test